Silsilado luul ah
Biyaha macaan ee Pearl Loose
Kuul Luul oo Dabacsan
Jilbaha Luulka Dabacsan
Miyaad si fiican u xiratay dayrta iyo jiilaalka?
by admin 2021-08-30
Mugdigu wuxuu dhaliyaa iftiin, dhibku wuxuu afaystaa khasnadaha. Qof dumar ah oo xidha silsilad luul ah ayaa dhalaalaysa, waa run. Qoorta qoorta dheer ee qoyan ayaa ah sheyga kaliya ee ugu habboon si kor loogu qaado dabeecadda, gaar ahaan dayrta iyo jiilaalka madow, caddaan iyo cawl. Qoorta luulka dheer ee qoyan ...
Soul Mate ee Dheddig
Macno malahan haddii aad musalaftay oo aadan xiran karin dhar magac leh. Xirashada qoorta luulka ah waxay is xusuusin kartaa inaad ahaan jirtay qof caan ah…
Luulka ayaa sidoo kale leh midabyo midab leh. In kasta oo aysan dadku weli si buuxda u soo gabagabeyn sababaha sameynta midabka luulka midabka leh, waxaa laga soo gabagabeyn karaa midabada luulka in midabada luulka ay xiriir weyn la leeyihiin hooyada-luulka ee dhasha t ...
Kuul Dahab Dahab ah oo Rinji ah iyo Kuul Dahab ah oo Dahab ah oo Badda Koonfurta ah
by admin 2021-07-03
Luulka dahabka ah ee aan caadiyan ka hadalno waxaa loola jeedaa Koonfurta Badda Pearl, oo ah nooc ka mid ah luulka biyaha badda oo ku dhashay badaha waqooyiga Australia, Filibiin, Malaysia iyo jasiiradaha Indonesia. Sababtoo ah midabkeeda dahabka ah, waxaa loogu yeeraa South Pearl Gold Pearl, oo sidoo kale loo yaqaan Koonfurta Badda Pe ...
Waa maxay sababta dahabkaaga luulka ah uu had iyo jeer u daallanaa?
Waxaa jira war la soo sheegay oo ku saabsan kiiska la xiriira tuhunka qiimaha luulka ee xarunta tijaabinta dahabka: Mr. Chou wuxuu ku qaatay ku dhawaad ​​USD1,500 si uu ugu gato xaaskiisa hal silsilad luul ah ku dhowaad 1.5mm, ...
Ma dooratay hilqadaha saxda ah?
"Dahabka waa aamusan yahay, laakiin wuxuu taabtaa qalbiga dumarka si ka fiican luqad kasta." - Shakespeare Marka haweeney dhadhan leh ay la kulanto gabal qurxoon oo qurux badan, waxaa jira dareen taabasho ah oo u dhexeeya labadooda. Dumarku waa ...
Soo jiidashada luulka
“Qoorta ugu habboon, kabka ugu habboon ee dhammaan dahabka adduunka, iyo alaabta lama huraanka ah ee dharka haweeney kasta-xarig luul ah. Haweeney kasta waa inay lahaataa xarig luul ah ”——Geneviève Antoine Dariaux Waxaa laga yaabaa inaad hore u lahayd dazzl ...
Saamaynta gudaha ee luulka
In kasta oo luulku uusan lahayn dhaldhalaalka dheemanka iyo quruxda dhaldhalaalka leh ee dahabka midabka leh, haddana midabkooda jilicsan oo jilicsan iyo qaab dabiici ah oo qurux badan ayaa noqday meesha ugu soo jiidashada badan. Luul kasta waa khasnad ay ka buuxdo firfircooni. Arrintan dahsoon ee aan la saadaalin karin ...
Nolosheena maalinlaha ah, waxaan marka hore dooran karnaa hilqadaha luulka ee dhaadheer, waa hubka ugu wanaagsan ee wax laga beddeli karo qaabka wejiga, labadaba xarrago iyo muuqaalba leh, waxaa la dhihi karaa waa shey lama huraan ah. Dhegaha dhaadheer waa kuwo fudud oo deeqsi ah oo qaab ahaan ah, waxaana loo waafajin karaa si aan caadi ahayn, taas oo ...
Meesha ugu fiican ee laga iibsado dahabka onlaynka ah: hilqado, faraantiyo iyo qaar kaloo badan
by admin on 2021-03-25
Arrintu waa tan: Waxaan jeclahay kabaha iyo bacaha sida gabadha xigta, laakiin waxaan qalbigayga ku haystaa meel gaar ah oo aan ku xirto dahabka. Dhab ahaantii, waxaan ku mashquulsanaa ururintayda yar. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale had iyo jeer raadiyaa dhar cusub oo dhalaalaya-nasiib wanaag, waxaan soo aruuriyay qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado dahabka ...
Cross-sea: dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan meesha luulka-Dahabka Ganacsiga Ganacsiga Badda-badda: horumarkii ugu dambeeyay ee meesha ku saabsan luulka
Luulka ayaa dadku aad ugu qushuuci jireen oo u qaddarin jireen tan iyo wakhtiyadii hore. Aad baa loogu qaddariyay Giriiggii hore iyo Rooma, tan iyo markaasna, waxaa adduunka oo dhan looga yaqaannay walxaha qurxinta iyo qiimaha. Qurxintaasi waxay ka timaadaa adduunka oo dhan. Waxaa weli jira luul dabiici ah ...
keebaa u dheer oo u xidhan luul kala duwan?
by admin on 2021-03-05
Biyaha Badda Pearl Akoya: Lakabka khafiifka ah ee budada ah way fududahay in la dhaco. Budada Pearl ee ka weyn 0.4mm dhumucdeeda waa la gashan karaa 5 sano, laakiin dhalaalku wuu daciif yahay oo wuxuu u baahan yahay in la miiro. Luulinta Badda Koonfurta: Dhammaan Luullada Koonfurta Koonfureed (Caddaanka Australia, Dahabka Dahabka ah, Tahiti), hav ...
Dhegaha Dhegaha ee Pearl Stud, Dhegaha Aroosyada, Sterling Silver Pearl Jijin, Aaa Luul Biyo Macaan ah, Biyaha Fresh Pearl Gift Aroosmaid, White Gray Freshwater Pearl,